Wafti ka socda Midawga yurub oo shalay gaaray Magaalada Muqdisho lana kulmay Raisulwasaare Cabdiweli iyo Xildhibaan kamid ah Musharixiinta Madaxweynanimada Soomaaliya... Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Wafdi ka socda Midawga yurub oo shalay gaaray Magaalada Muqdisho lana kulmay Raisulwasaare Cabdiweli iyo Xildhibaan kamid ah Musharixiinta Madaxweynanimada Soomaaliya.... Wafdi heer sare ah oo ka socda Midawga Yurub ayaa shalay gaaray Magaalada Muqdisho, waftigaas ayaa Garoonka magaalaad muqdisho kula kulmay Raisulwasaaraha Soomaaliya Cabdi weli iyo Xildhibaanka ah Musharax ka mid ah musharixiinta Madaxtinimida Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Waftiga ayaa markii ay soo gaareen Garoonka Magaalada muqdisho waxaa ay isla markiiba u direen gawaardida qafilan ee aan Xabaduha karin Xildhibaan Cabdiraxmaan oo dhowaan ku dhawaaqay inuu Musharax u yahay Madaxweynanimada Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ah ruug cadaa siyaasadeed dawladihii dalka soo maray sanidihii la soo dhaafay ka qabtay jagooyin Wasiirnimo, Cabdiraxmaan Cabdishkuur ayaa iska casilay Wasiirka qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah oo uu ka hayay xukuumaddii Raisulwasaare Cumar Cabdirashiid kadib marka uu sheegay inuu la shaqeyn kari waayey Madaxweyne Shariif.
Madaxweyne Shariif ayaa lagu sheegay mid lumiyay saaxiibo badan oo gacan ka geystay kursiga uu maanta ku fadhiyo, iyadoo xiligii uu xukunka dalka hayay ay dalka ka dhacday Musuqmaasuq baahsan.
Waftiga shalay gaaray Magaalada Muqdisho oo la kulmay Raisulwasaare Cabdiweli iyo Musharaxa Madaxweynanimada Soomaaliya Xildhibaan Cabdirahmaan Cabdishakuur ayaan la shaacin waxyaalihii ay ka wada hadleen,kulanka ayaa ahaa mid albaabadu u xirnaayeen labada siyaasi midba mar la qaabilay.
Waftiga ayaa dib ugu laabtay Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya kadib kulankaa ay la qaateen Cabdiweli iyo Cabdiraxmaan cabdishakuur.